Ny Boost Buddies dia iray amin'ireo olon-tsotra izay azonao atao amin'ny fitiavana | Androidsis
Lalao mahazatra, toy ny amin'ny Mampiroborobo ny Buddy ary tena mampiankin-doha izanyTsy maintsy manana singa tena ilaina izy mba hahafahana milalao mandritra ny fotoana maharitra. Ny olana dia matetika miaraka amin'ny atiny kely fotsiny izy ireo, noho izany satria tsy mampiankin-doha ny paikadin'ny lalao, dia ho very haingana ny filalaovana anao.
Eto isika dia afaka manadino izany amin'ny fananana a fomba fiasa izay mifantoka amin'ny fahaiza-manao fa tokony hahay handresy ny tadin'ny sakana tsy mitovy amin'ny endrika sy mekanika rehetra isika. Eo no asehon'ireo Boost Buddies ny fomba fanaovana mahazatra amin'ny Android.
1 Lalao tsara eritreretina amin'ny lafiny maro
2 Vato misakana 100 samy hafa toy ny fanamby lehibe
3 Vatosoa kely mahazatra
Lalao tsara eritreretina amin'ny lafiny maro
Boost Buddies dia misongadina amin'ny fisehoana an-tsary miaraka aminy famolavolana Retro izay mampiavaka azy ary izay manome azy io totohondry totohondry hanantona antsika hatramin'ny fotoana voalohany. Saika ny lalao dia mifototra amin'ny fanindriana ny efijery mba hanomboka hitsangana ilay maherifo amin'ity lalao ity ary hahatratra ny tampony hanangonana ny loka azony.
Amin'ity dia mankany an-tampon'ny efijery ity no hihaonantsika fahasamihafana isan-karazany. Hiova izy ireo rehefa mahatratra ny loka isika ary manomboka amin'ny fandrika spike isan-karazany izay mihodina amin'ny bisikileta ka hatrany amin'ireo fitaovana mandrehitra hazavana amin'ny laser izay hahitan'ny mpihetsiketsika ny fiainany raha sendra vintana tsy ampy fahaizana isika.
Io no lehibe karazana fandrika sy sakana hiatrehantsika izay mampiavaka ity mahazatra antsoina hoe Boost Buddies ity. Lohateny izay iray amin'ireo lalao antsoina hoe "rajako" na "cuckoos" noho ny faharatsian'ny endriny amin'ny zavakanto pixel.
Vato misakana 100 samy hafa toy ny fanamby lehibe
Raha efa niresaka momba ny sakana maro samihafa isika dia satria izy ireo totalin'ny 100 isan-karazany ireo ho hitanao. Azonao alaina sary an-tsaina izay rehetra anananao mialoha mba hiezaka handresy ireo fanamby rehetra ireo.
Afaka manisa koa isika miaraka amina lohahevitra 20 samihafa ho an'ny feon-kira. 1 fotsiny ho an'ny toetra tsirairay. Ary azonao atao ny mizatra amin'ilay hevitra hoe ahoana no ahafahanao mamoha azy ireo. Na mandalo ny carte debit na carte de crédit anao ianao na mitahiry vola madinika hahalalana ny tsirairay amin'ireo olo-malaza mampihomehy izay tena mpiandany amin'ny Boost Buddies.
Ary raha na inona na inona antony nandalanao ny ambaratonga rehetra dia azonao atao ihany koa ny mitsapa ny tenanao alohan'ny ambaratonga roa samy hafa ny sarotra. Fahafatesana iray izay vao nahalalaka ny mpilalao marobe ary nandritra ny andro vitsivitsy tao amin'ny Google Play Store dia mety ho ohatra miharihary amin'izany ny fijerena.
Vatosoa kely mahazatra
Miaraka amin'ireo olona tsy mahazatra niainantsika hatrizay, izay azontsika atao asongadino ny Picky Package, Boost Buddies dia mihoatra ny fialamboly mahafinaritra izay hankafizinao maimaim-poana amin'ny fahafahanao misintona azy avy amin'ny Google Play Store. Tsy hoe io no ho vaky farany amin'ny taona, fa hapetraka ho lalao nilalaovana ihany. Hiankina amin'ny olona saika hiala hanohy ny fahatsiarovany azy izany.
Ara-teknika izany tena manaitra amin'ny lohahevitra sary miaraka amin'ny famolavolana ny endri-tsoratra ary ilay zavakanto pixel izay maka ny zava-drehetra ka tena mahafinaritra ny mijery azy io. Ny fahasamihafana lehibe isan-karazany koa dia manana ny azy ary manome ny tenany amin'ny fomba tsara indrindra izy ireo amin'ny ankapobeny, miatrika vintana tena mahaliana isika.
Boost Buddies dia iray amin'ireo anaram-boninahitra an-tsitrapo izay tsy voamariky ny voalohany, fa izany ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka manao lavaka amin'ny tontolon'ny lalao sarotra ho an'ny finday ianao. Indrindra fa isaky ny sarotra ny fifaninanana ary mila mitondra lalao vita tsara ianao mba hiavaka amin'ny farany. Ho hitantsika raha mbola velona mandritra ny volana maromaro ny Boost Buddies ary ao amin'ny pejy Google dia manangona hevitra an'arivony amin'ny fisintomana an'aliny izy.
Mampiroborobo ireo sakaiza
Tena tsara amin'ny lafiny sary
Betsaka ny sakana sy fanamby
Lohahevitra iray isaky ny toetra
Mety tsy hanana karazana maro kokoa amin'ny tontolo iainana izy io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Fahafinaretana mahafinaritra sy mampiankin-doha amin'ny Boost Buddies
ARCHOS dia manolotra ny Oxygen 57, 63 ary 68 XL alohan'ny MWC